Home somali news UK oo soo saartay digniin ka dhan ah Soomaaliya, balse ay ka...
London (Caasimada Online) – Dowladda Ingiriiska ayaa markale ku celisay digniintii safarka ee Soomaaliya, iyada oo ka reebtay deegaano ka tirsan Somaliland, midaasi oo ay ku sheegtay qoraal ku socday muwaadiniinteeda.
Xafiiska Arimaha Dibada ee Ingiriiska ayaa shaaciyey inay markale dowladdoodu ay dib u cusbooneysiisay xayiraadihii safarka ee ay ku joojisay in muwaadiniinteedu ay tagaan gudaha Soomaaliya.
UK ayaa muwaadiniinteeda uga digtay tagista Soomaaliya, oo ay ku sheegtay in weli ay ka taagan tahay qatartii ay hore uga joojisay inay ugu safraan, taasi oo aheyd saddex sanno ka hor.
Qoraalkaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay weeraro argagixiso wajaheyso, taasi oo halis ku ah amniga muwaadiniinta UK, oo dowladdu ay sheegtay inay mas’uul ka tahay.
“Argaggixisada waxay u badan tahay inay isku dayaan inay weerarro ka fuliyaan gudaha Soomaaliya, iyadoo ay jirto qatar sare oo afduub oo dalka oo dhan ah” ayaa lagu yiri qoraalkaasi Xafiiska Arimaha Dibada ee UK.
Waxaana ugu dambeyntii qoraalkaasi lagu sheegay in muwaadiniinteeda u safraya Hargeysa iyo Berbera, ay muujiyaan feejignaan dheeriya, midaasi oo ka dhigaysa in xanibaada safarka muwaadiniinteeda ee Soomaaliya aysan ku jirin Somaliland.
Somaliland oo iyadu ku dooda inay tahay dal ka madax-banaan Soomaaliya, ayaa amni ahaan ka fiican gobolada kale, taasi oo la rumeysan yahay inay qeyb ka tahay kala saarista dadban ee uu Ingiriisku sameeyay.
Xanibaada safarada muwaadiniinta UK ee ku aadan gudaha Soomaaliya ayaa soo socotay sanadihii u dambeeyay, iyada oo Ingiriisku uu sanad walba dib u cusbooneysiiyo, isagoona ka boorinayey muwaadiniintiisa u safrida dalkeena.
Previous articleQiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Arsenal & Man City – SADDEX Ciyaartoy Oo Arsenal Ah Oo Isku Qabsaday Xiddiga Garoonka & Aubameyang Oo Cidlo La Diray
Next articleArsenal Oo Iska Xaadirisay Finalka FA Cup, Arteta Oo Ka Aargoostay Macallinkii Iyo Gunners Oo Sugaysa Man United & Chelsea Midka Finalka Ugu Imanaysa
Shaxda Rasmiga Ah Ee Kulanka Barcelona vs Atletico Madrid – Setien oo kaydka Geliyey Fati...
Sports news June 30, 2020
David Silva Oo Dunida La Wadaagay Nolosha Murugada Leh Ee Ku Qarsoon Qosolka Uu Garoomada...
Sports news June 2, 2020
Robin Van Persie Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ballon d’Or Ku Tartami Doona – Kuma...
Mareykanka oo Xayiraad Dhinaca Fiisaha Saarayo Mas’uuliyiin Ka Soo Jeeda Shiinaha – Goobjoog News
somali news June 27, 2020
Saraakiil Ka Tirsan Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo Ku Baxay Xiisado Ka Taagan Hiiran –...
somali news June 24, 2020